Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
"Kedu ihe bụ ịhụnanya?" bụ otu n’ime ihe ndị kasị chọọ okwu na ịntanetị. Nkwubi okwu nke Grant Grant, ihe omumu nyocha nke iri abuo n’ise na Harvard University, bu na “obi uto bu ihunanya”. O gosipụtara na mmekọrịta na-ekpo ọkụ bụ ihe ndabere kachasị mma maka ahụike, akụnụba na ogologo ndụ. N'ụzọ dị iche, ị addictionụ ọgwụ ọjọọ, ịda mbà n'obi na neurosis bụ ihe mgbochi kachasị na ọnọdụ a kachasị chọọ. Ghọta ihe ize ndụ dị na ịntanetị iji mee ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ izere ịbanye n'ime ahụ riri ahụ ma chọta mmekọrịta ịhụnanya na-enye afọ ojuju kama. Inweta njide na ịhụnanya, mmekọahụ na ịntanetị dị ezigbo mkpa.
N'akụkụ a, Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ ahụ na-enyocha ọtụtụ ụzọ dị iche iche ndị mmadụ si emekọ ihe na ndụ ha niile. Gịnị na-eme ka mmekọrịta na-arụ ọrụ? Kedu ka ị ga esi ada n'ịhụnanya ma nọrọ n'ịhụnanya? Kedu ihe bụ ọnyà ndị nwere ike ịkwali gị?
Anyị na-elekwasị anya na sayensị nke mmekọrịta na-aga nke ọma. N'ọnọdụ ụfọdụ ịkwesịrị ileba anya na usoro ihe ọmụmụ na ụbụrụ ụbụrụ maka ihe niile iji nwee uche. Mmetụta Coolidge dị ike karịsịa.
• Kedu ihe bụ ịhụnanya?
• Ịhụnanya dị ka nkwonkwo
• Abụọ Bonding Di na nwunye
• Ịhụnanya dị ka agụụ mmekọahụ
• Nsogbu Coolidge
• Ịkwụsị Ọchịchọ Mmekọahụ
• Mmekọahụ na Porn
Anyị na-enyekwa ọtụtụ Resources iji kwado nghọta gị banyere nsogbu ndị a.